15 Siyaabood oo lacag looga helo Tumblr sanadka 2022
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood oo lacag looga helo Tumblr sanadka 2022
Laga soo bilaabo noqoshada goob bulsheed oo ay dadku ku wadaagaan qoraal, sawirro, muusig, iyo fiidiyowyo, Tumblr waxay u rogmatay qalab lacag-qaadasho oo xooggan. Marka, su'aashu waxay tahay sidee lacag uga sameysataa Tumblr?
Haddii aad raadineyso inaad ka hesho waxa ugu fiican Tumblr waa inaad diyaar u ahaataa inaad waqti geliso, hagaajiso koontadaada iyo sidoo kale, baro qaabab cusub oo aad lacag uga abuuri karto madal.
Tumblr waa shabakad bulsho iyo shabakado wax ku qora oo ay aasaaseen Marco Arment iyo David Karp sanadkii 2007. Xayeysiisyadii ugu horreeyay waxaa la soo dhejiyay 2012 ka dibna waxay heleen ilaa 13 milyan oo soo celin ah. Bishii Maajo 2013, Tumblr waxa ay Yahoo ku iibsatay 1.2 bilyan oo doolarka Maraykanka ah.
Shirkadda waxaa markaas la wareegtay Verizon bishii Juun 2017 heshiis ay ku midoobeen Yahoo iyo AOL shirkad cusub oo Verizon leedahay oo la yiraahdo, Oath.
Shirkadda isku -xirka bulshada waxay dakhli ka heshaa xayaysiisyada, boostooyinka la kafaalo qaaday, iyo adeegyada kale. In kasta oo Tumblr, ay leedahay ilaa 450 milyan oo baloog oo malaayiin qoraallo cusub ah maalin walba, haddana ma aysan helin lacag aad u badan.
In kasta oo Tumblr uusan ka mid ahayn baraha bulshada ee ugu caansan, haddii aad ku jirto, waxaa jira siyaabo gaar ah oo aad lacag uga heli karto barnaamijka. Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa 15 siyaabood oo aad lacag uga heli karto Tumblr.
Miyay suurtogal tahay in lacag laga sameeyo Koontadayda Tumblr?
Tumblr sidoo kale waa meel aad ku xiriiriso dadka oo aad la wadaagto fikradahaaga, sidoo kale waa meel aad lacag ka heli karto.
Tumblr waa meel cajiib ah oo lagu suuqgeeyo alaabtaada laguna kordhiyo iibka. Xaqiiqdii, waa inaad aad uga welwelsan tahay kordhinta kuwa raacsan sababta oo ah inta raacsan ee aad yeelato, iibka badan ayaad heli doontaa.
Iibinta mooyaane, waxa kale oo aad lacag ku heli kartaa suuq-geynta xiriirka la leh, halkaas oo aad ka iibiso alaabada goobaha kale ee wax iibsiga oo lacag lagu siiyo.
Sidoo kale, waxaad lacag ka heli kartaa Tumblr adoo xayeysiis ku dhejinaya bogga astaantaada. Markaa, waxaad kasbataa mar kasta oo uu qof gujiyo.
Waa maxay siyaabaha lacag looga sameeyo Tumblr?
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lacag looga helo Tumblr. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah siyaabaha ugu waaweyn ee lacag looga helo Tumblr waa dib -u -habeyn.
Dib -u -habeynta ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan ee madal. Sidaa darteed, waa inaad maskaxda ku haysaa markaad ku dhex socoto Tumblr.
Sidoo kale, waxaad ka dhigi kartaa Tumblr meel aad wax ku iibiso, halkaas oo aad ku suuqgeyso alaabtaada iyo adeegyadaada. Runtii, waxaa laga yaabaa in lagaa qaado lacag aad ku muujiso alaabtaada, laakiin waa u qalantaa.
Waxaad sidoo kale lacag ka samayn kartaa xayeysiisyada Google Adsense ee Adsense caanka ah. Dhab ahaantii, waxaa jira xayeysiisyo aad ku dari karto balooggaaga oo waxaad kasbataa lacag marka qof uun gujiyo.
Ma samayn karaa qaddar macquul ah oo lacag ah isticmaalka Tumblr?
Qaddarka aad sameyso adoo adeegsanaya Tumblr waxaa go'aamiya arrimo ay ka mid yihiin:
tirada dadka raacsan ee aad leedahay,
sida ay u firfircoon yihiin oo u soo jiidan karaan qoraalladaada,
tirada xiriiriyeyaasha kuxiran blogyadaada iyo
ugu dambayn, haddii aad awooddo inaad korodho koontadaada si aad u kordhiso iibka.
XIDHIIDHKA: 9 Siyaabood oo aad lacag ugu sameysato Daabacaha 3D sanadka 2022 | Tusaha Ugu Dambeeya
Sida xaqiiqda ah, haddii aad adeegsato habka saxda ah, waxaad lacag badan ka samayn doontaa Tumblr.
Sideen ku heli karaa kuwa raacsan Tumblr?
Haddii aad rajeyneyso inaad lacag ku kasbato Tumblr, waxaad u baahan tahay qaddar aad u badan oo raacayaasha balooggaaga ah. Akhri tilmaanta ku saabsan sida aad ku heli karto kuwa raacsan Tumblr.
Ka dib markaad iska diiwaangeliso Tumblr, waa inaad noqotaa mid aad u firfircoon haddii aad rajeyneyso inaad hesho kuwa raacsan. Markaa kadib, waxaad go'aan ka gaari doontaa nooca maadada aad rabto ee ku jirta balooggaaga, codka ay nuxurkaagu qaadan doono, iyo inta u dhexaysa ee aad soo saari doonto dhejimaha.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ugu yaraan raacdo dadka ama summadaha durba sameynaya waxaad rabto inaad sameyso.
Daacadnimo, uma baahnid inaad nuqul ka samaysato qaabkooda. Waxa kaliya oo aad heli kartaa fahan ku saabsan waxa aad samayn karto si aad u kobciso 'raacitaankaaga'.
Mar labaad, waa inaad ka dhigtaa qoraalladaada mid xiiso leh oo soo jiidasho leh si loo hubiyo in kuwa raacsan ay sii socdaan oo xitaa ay dadka kale kaaga sheegaan.
15 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Tumblr
Haddii aad raadinayso inaad faa'iido ka hesho joogitaanka goobtan, liiska hoose wuxuu ka kooban yahay habab toos ah oo aad ku codsan karto oo aad ku kasban karto Tumblr.
# 1. Xayeysiinta
Xayeysiintu waa hab fiican oo lacag looga helo Tumblr. Dhab ahaantii, waxaad ku dhejin kartaa xayeysiiska balooggaaga si kor loogu qaado badeecadaha summadaha.
Lacag ayaa laguu siiyaa mar kasta oo isticmaale soo galo boggaaga oo gujiyo xayeysiiska. Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad haysato tiro badan oo raacsan si aad u kordhiso suurtagalnimada guji.
Mar labaad, waa inaad ka faallootaa baloogga dadka kale si aad ugu yeerto fiiro gaar ah boggaaga.
Si aad lacag uga samayso xayaysiis, waxaad codsan kartaa iyada oo loo marayo Dhallinyaro ama shabakado kale si ay wax u bartaan oo ugu dhaqmaan habka ugu wanaagsan ee lacag loo sameeyo. Shabakado kala duwan ayaa leh shuruudo kala duwan iyo qaabka hawlgalka.
#2. Iibi Buugaagtaada
Qoraa doonaya inuu iibiyo buugaag badan, lacag ka sameynta Tumblr waa guul la gaari karo.
Marka hore, waxaad abuuri kartaa sawirro xiiso leh oo leh xigashooyin buuggaaga ah oo ku dheji sawirradaas balooggaaga Tumblr. Xigashooyinkani waxay noqon karaan kuwo soo jiidasho leh, wax kicinaya xiisaha dhagaystayaashaada oo ka dhiga inay rabaan inay sii akhriyaan.
Iyada oo ay weheliso xigashooyinka aad samaysay, waa inaad ku dartaa iskuxir ay dadku si toos ah u heli karaan buuggaaga.
#3. Qoraallada la kafaalo qaaday
Waxaad daabici kartaa qoraallo la kafaalo qaaday si aad lacag uga hesho Tumblr. Waa inaad awood u yeelatid inaad si joogto ah u siiso nuxur faahfaahsan oo soo jiidasho leh dhagaystayaashaada si aad si hufan ugu dhiirrigeliso alaabada kafaala -qaadayaashaada.
Maadaama xiriiriyeyaasha lagu dari karo qoraallada sawirrada, marka adeegsadayaashu dib u dhajiyaan sawirrada, xiriirku wuu muuqan doonaa oo waliba wuxuu ku toosin doonaa mareegaha weyn.
Ma rabtaa inaad lacag ka hesho Tumblr? Tijaabi infographics. Waxaad isticmaali kartaa infographics si aad kor ugu qaaddo koorso ama xitaa ebook aad iibineyso.
XIDHIIDHKA: Sida Looga Dhigo 10k Bilkasta Online Toosan | 15 Hacks oo la Xaqiijiyay 2022
Infographics -ka sida caadiga ah waxay si fiican ugu shaqeeyaan Tumblr. Waxaad ku dhejin kartaa isku xirka goobta ay ku yaalliin buugaagta ama koorsooyinka.
#5. La -taliyaha alaabooyinka
Haddii aad khabiir ku tahay “sida Tumblr u shaqeyso”, waxaad u fidin kartaa adeegyadaada ururada ama sumcadaha danaynaya dhisitaanka joogitaanka Tumblr.
Sidoo kale, waxaad go'aansan kartaa inaad si buuxda u hurto waqtigaaga si aad wax uga barato barnaamijka, u barto gudaha iyo dibedda iyo shaqooyinka guud ee madal.
Aqoontani ma khasaari karto sidaad u gelin karto caawinta shakhsiyaadka iyo sumadaha labadaba si ay u maraan. Waxaad ku bari kartaa barashada fiidiyaha ama qoraallada. Waxaad kaloo ku dari kartaa sawirro cad oo leh faahfaahinta habka.
Tumblr waa goob weyn oo wax lagu iibiyo. Haddii aad mar hore ku iibinaysid goobo sida eBay, Craiglist, Esty, iyo kuwa kale, waxaad isticmaali kartaa Tumblr si kor loogu qaado iibka.
Ka qaad sawirro cad oo la yaab leh alaabtaada, kula wadaag Tumblr isku xirka u haga macaamiisha mustaqbalka halka ay ka heli karaan alaabta.
#7. marketing affiliate
Waxaad lacag ku samayn kartaa adoo ku dhejinaya xiriiriyeyaasha xiriiriyeyaasha ee balooggaaga. Marka isticmaale gujiyo xiriiriyaasha, waxaad heleysaa guddi.
Haddii koontadaada Tumblr ay mar horeba ku salaysnayd wax-soo-saar, sida baloog meesha aad joogto dib u eegis alaabta quruxda, waxaad lacag ka samayn kartaa iyada oo loo marayo xiriiriyeyaasha xiriirka. Waxaad sidoo kale ku biiri kartaa Barnaamijka Isku -xiraha Amazon oo ku dar xiriiriyeyaasha Amazon koontadaada.
Marka booqdayaashu gujiyaan iskuxirka waxaad ka kasban doontaa Amazon. Amazon ma aha ikhtiyaarka kaliya ee xiriiriyeyaasha xiriirka, sidoo kale waxaad leedahay ShareASale iyo sumado kale oo caan ah. Waa inaad ka taxaddartaa inaadan lahaan xiriiryo aad u badan oo xiriir la leh sida ay awooddo koontadaada oo la tirtiro.
#8. Bar dadka kale sida loo isticmaalo Tumblr
Haddii aad si dhab ah u taqaanid hareeraha madasha, sida loo kobciyo kuwa raacsan, loo kordhiyo iibka iyo waxyaabaha la midka ah, waxaad soo bandhigi kartaa khibraddaada. La xiriir dadka hadda ka bilaabaya madal, waxaadna ka caawin kartaa iyaga inay lacag ku maraan jidkooda.
#9. Iibi naqshadahaaga
Haddii aad tahay naqshadeeye, waxaad ku soo saari kartaa xulashada shaqooyinkaaga ugu fiican Timblr, markaa waxaad ku dari doontaa isku xirka bogga adeegyada saxda ah si macaamiisha suurtagalka ah ay si toos ah ugu helaan iibsashada.
#10. Meesha xayaysiiska
Haddii balooggaagu caan yahay, waxaad ku iibin kartaa boos badan intaad ku iibin lahayd aaladaha kale ee wax lagu qoro. Noocyadu waxay raadinayaan inay badeecadooda u gudbiyaan macaamiisha ugu badan ee suurtogalka ah, sidaa darteed blogger leh tiro badan oo raacsan ayaa siinaya fursad ay ku gaaraan dad badan.
#11. La wadaag farshaxankaaga
Tumblr waa meel cajiib ah oo lagu soo bandhigo qaybaha farshaxankaaga. Waxaad ku wadaagi kartaa farshaxankaaga ama sawir qaadistaada Tumblr oo ay weheliso isku xirka galalkaaga/bogga wax iibsiga qayb kasta.
XIDHIIDHKA: 21+ Siyaabaha Lacag Loogu Sameeyo Hal Saacad | 2022
#12. Iibi mawduucyada Tumblr
Si aad lacag uga hesho tan, waa inaad runtii noqotaa hal -abuur. Waa inaad awood u yeelatid inaad ka fikirto oo aad abuurto naqshado gaar ah oo dadku diyaar u yihiin inay iska bixiyaan.
Waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso xirfadahaaga farsamo haddii aad rajaynayso inaad abuurto mawduucyo Tumblr oo aad u fiican. Xirfadaha farsamo ee heer sare ah marka lagu daro maskaxda hal-abuurka leh, wax dhib ah kuma yeelan doontid inaad lacag ka samaysato tan.
Waxaad u baahan doontaa inaad fahanto kala -fogaanshaha, wareegga agagaarka Tumblr, sida ugu wanaagsan ee loo abuuri karo sawirro, isku -darka midabada iyo guud ahaan quruxda dadka.
#13. Faallooyinka buugga
Haddii aad jeceshahay akhriska oo aad xiisaynayso buugaagta, waxaad isku dayi kartaa inaad dib u eegto. Dabcan, qof walba ma awoodi doono inuu lacag ku sameeyo Tumblr iyada oo loo marayo iibinta alaabada ama xayeysiinta.
Waxaad qori kartaa faallooyin ku dhawaad ​​nooc kasta oo buug ah. Waxay noqon kartaa shaqo suugaaneed, buug ganacsi, dokumentiyo, ama buugga waxbarashada.
Waxa kale oo aad dib u eegi kartaa filimada, muusigga, bandhigyada TV -ga, fiidiyaha fiidyowyada oo ay weheliyaan buugaag.
Waxaad u adeegsan kartaa koontadaada Tumblr si aad u kobciso boggaaga Youtube. Ku dheji xiriirada kanaalkaaga Youtube boostadaada si kor loogu qaado taraafikada boggaaga Tumblr.
# 15. Amazon
Amazon waa mid ka mid ah meheradaha iibinta ugu sarreeya adduunka oo waxaad ku iibin kartaa wax kasta halkaas. Waxba ha ahaadee niche aad u dooratay boggaaga Tumblr adiga, marmarka qaarkood waxaad samayn kartaa qoraal ku saabsan badeecad ama adeeg oo ku xira Amazon adoo adeegsanaya iskuxirka Amazon Associate.
Sida aaladaha badankood, haddii aad raadineyso inaad ka hesho Tumblr sida ugu wanaagsan waa inaad diyaar u ahaataa inaad geliso waqti, dadaal, iyo hal -abuur.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad samirto waayo waxyaalaha wanaagsani hal mar ma wada dhacaan. Waa inaad diyaar u ahaataa inaad hagaajiso koontadaada iyo khibradaada, barato siyaabo iyo heerar cusub oo aad lacag uga samayn karto madal.
Waxaa ugu wanaagsan inaad si joogto ah oo asal ah ula socoto waxyaabaha aad soo dhigtay si dadku kuu aaminaan. Haddii aad soo saarto dhowr qoraal oo xiiso leh toddobaadle, waxay ku haysaa xiisahaaga kuwa xiiseeya. Waxay yaqaanaan goorta ay ku soo laaban doonaan balooggaaga maadaama ay jiraan wax la sugayo.
Tumblr waa meel dabacsan, waxaadna u isticmaali kartaa sifahan faa'iidadaada. Waxa kale oo aad u fudud in la isticmaalo.
Markaad soo martay siyaabo aad lacag uga samaysan karto Tumblr, hadda adiga ayaa laguu daayaa inaad go'aansato midka aad bilaabi doonto ama aad u wareejin doonto, taasi waa haddii aad ku lug lahayd habab kale.
DIB U HESHIISKA WAALIDIINTA
10 Siyaabood Oo Aan La Qaban Karin Oo Lacag Laga Helo Maansada
Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsiga Iyo Iibinta Cryptocurrency | Tilmaan Buuxo
Siyaabo Cusub Oo Lacag Looga Helo Casino | Tusaha Khubarada
9 Siyaabood Oo Xalaal Ah Oo Lacag Looga Helo Pinterest | $ 250/maalin
21+ Siyaabaha Lacag Loogu Sameeyo Hal Saac
Sida Lacag Loogu Sameeyo Fallout 4 | Tilmaan Buuxo
Sida Loo Sameeyo Lacag Xagaaga | 20 Siyaabo Hubaal ah
Waa maxay Maalgelinta Aaminaada? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
15ka App ee ugu Wanaagsan ee Buugaagta iPhone | 2022
Sida Loo Helo $ 100 Sanduuqa PayPal ee Bilaashka ah 2022 | Lacag Degdeg ah
Xawilaadda lacag-isku-faca ah, Paypal waxay garaacdaa barnaamijyada kale sida Venom iyo Zelle maxaa yeelay waa mid aad loo heli karo oo…
Daqiiqad 4 akhri
Ku noqo Filim Dheeraad ah Filim iyo Qurxiyo ilaa $ 100 Maalin kasta
U soo dhawaada sir liil ah; waxaan helnay hack! Haa, hab aad u fudud oo lagu jabiyo...
Sida lacag loo sameeyo sida ilmo 2022 | 5-17 sano
Barashada sida lacag loo kasbado sida cunugga waa xirfad aad u wanaagsan oo kaa faa'iideysan karta…
Sidee ayuu Chime lacag u sameeyaa: Chime? | Qaabka ganacsiga 2022
Waxay u badan tahay inaad maqashay xisaabaadka bangi ee bilaa lacag ah. Isla markaa, waxa aad u malaynaysay in aad naftaada u malaynaysay, "Sidee...
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda ee Amazon oo Lacag La'aan ah: 24 Tricks si aad u hesho $ 100 Off 2022
Shakhsiyaadka badankoodu waxay jecel yihiin dukaamaysiga. Wayna jecel yihiin, xitaa in ka badan, markay lacag la’aan wax ku iibsan karaan. Haddii aad…